थारु समुदायको दु:ख : सिक्कल सेल एनिमिया- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १९, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — पीडा नै यति बेला उनको साथी बनेको छ । उनको शरीरको कुनै पनि भागमा कुनै पनि बेला दुख्न थाल्छ । सबैभन्दा बढी छाती, पेट र हातखुट्टामा पीडा हुने गर्छ । यो सब उनकै कारण भएको भने होइन । उनले बाजेबराजु हुँदै बुवाआमाबाट वंशानुगत रूपमा पाएको रोग सिक्कल सेल एनिमियाले गर्दा यो कष्ट भोग्नुपरिरहेको हो ।
‘यसको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न,’ बर्दियास्थित बार बर्दिया २ का वडाध्यक्ष खुसीराम थारू आफ्नी २९ वर्षीया छोरीको दु:ख सुनाउँछन्, ‘यो पीडा मरेर बाँच्नुजतिकै हुन्छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण परिवार प्रभावित हुन्छ ।’
हाम्रो मुलुकमा यो रोग सबैजसो समुदायका मानिसलाई फाट्टफुट्ट हुने गरे पनि पश्चिमको थारू समुदायमा भने उल्लेख्य भेटिने गरेको छ । ‘सिक्कल सेल पश्चिम नेपालको थारू समुदायमा करिब १२ प्रतिशत रहेको एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ,’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्की अध्यक्ष डा. अञ्जनी झा भन्छिन् ।
सिक्कल सेलको जिन औलोग्रस्त क्षेत्रमा पाइने भेरी अञ्चल अस्पतालका चिफ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डे बताउँछन् । यो रोग पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका थारू समुदायमा बढी देखिएको छ ।
सिक्कल सेलग्रस्त करिब ६ प्रतिशत बालबालिकाको ६ महिनाभित्रै मृत्यु हुने गरेका छन् भने एउटा ठूलो हिस्सा २०/२१ वर्षमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छ । उक्त रोगले प्रभावितहरू पनि जीवनको कुनै समयमा गएर गम्भीर रूपमा बिरामी पर्छन् । पश्चिम नेपालमा सिक्कल सेल रोगका कारण चिकित्सककहाँ पुग्नेहरूमध्ये ७० प्रतिशतजति १५–३० वर्ष उमेर समूहका रहेको तथ्यांक दिँदै डा. पाण्डे भन्छन्, ‘सिक्कल सेल भएका ४० वर्षमाथिका बिरामी थोरै छन् । अहिलेसम्म दुई जना ६० वर्षमाथिका बिरामीको उपचार गरेको छु ।’
पुस्तौंपुस्ता चल्ने सिक्कल सेल रोग हाम्रो रगतमा भएको रातो रक्तकणिकाभित्रको हेमोग्लोबिनलाई प्रभावित गर्ने रोग हो । यो रोगको सबैभन्दा पहिलो वर्णन जेम्स हैरिक नामक चिकित्सकले सन् १९१० मा ग्रेनाडाका चिकित्सा विज्ञानका छात्रमा हँसिया आकारको रातो रक्तकोष भेटेपछि गरेका थिए ।
हेमोग्लोबिनले हाम्रो शरीरको प्रत्येक खण्डमा अक्सिजन पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सिक्कल सेलका रोगीमा फरक प्रकारको हेमोग्लोबिन पाइन्छ । यसमा रातो रक्तकोषिका गोलो हुनुको सट्टा आकार परिवर्तित भई हसिया आकारको हुन जान्छ । यसको आकार मात्र परिवर्तन हुँदैन, सिक्कलग्रस्त रातो रक्तकोषिका लेसाइलो एवं कडासमेत हुने भएकोले यो साँघुरो रगतको नलीमा सजिलै प्रवाहित हुन पाउँदैन । कति पटक त यो रगतको नलीमा अवरोधसमेत उत्पन्न गर्छ ।
‘यसले रगतको माध्यमले तन्तुमा हुने अक्सिजनको आपूर्तिमा बन्द भएर त्यहाँ दुख्न थाल्छ र तन्तु नष्ट हुन थाल्छन्,’ वीर अस्पतालकी मेडिकल जेनेटिक्स युनिटकी प्रमुख डा. निलम ठाकुर भन्छिन्, ‘सिक्कलको कुनै खास उपचार उपलब्ध छैन । बोनम्यारो र स्टेम सेल प्रत्यारोपणबाट सीमित व्यक्तिको उपचार गर्न सकिन्छ ।’
यो रोगको उपचारको मुख्य लक्ष्य रोगीलाई पीडा नहोस् भनेर कुनै उपाय गर्नु, स्ट्रोक एवं अन्य लक्षण र जटिलता रोक्नु र आँखालाई नोक्सान हुन नदिनु नै हो । यसको कुनै एउटा खास उपचार नभएकोले प्रत्येक रोगीमा देखिएको लक्षणका आधारमा उपचार गर्ने प्रक्रिया फरक हुने डा. ठाकुर बताउँछिन्। ‘उपचारको मुख्य उपायअन्तर्गत रगत चढाउनु, नसाको माध्यमले औषधि दिनुको साथै औषधिहरूको माध्यमले दुखाइ कम गर्नु हो,’ उनले भनिन्।
सिक्कल सेलका दुई थरी बिरामी हुन्छन्— बाहक र रोगी ।यो रोगको बाहकमा सामान्य रूपमा रोगको लक्षण प्रकट हुँदैन । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका डा. श्याम विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसलाई समाप्त गर्न नसकिए पनि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको समुचित प्रयोग गरेर यसको दुष्प्रभाव घटाउने सकिन्छ ।’ सामान्यत: रगत कोषको आयु १ सय २० दिन भए पनि सिक्कल सेलमा रातो रक्तकोष निर्माण भएको १० देखि २० दिनभित्र मर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सिक्कल सेलमा रातो रक्तकोष छिटो प्रतिस्थापन नहुने भएकोले रगतमा रातो रक्तकोषको कमी आएर प्रभावित व्यक्तिलाई रक्तअल्पता हुने गर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ १३:१२
ठेकदार पछ्याउदा जुत्ता फाट्छ : योगेश भट्टराई
जेष्ठ १९, २०७५ आनन्द गौतम
ताप्लेजुङ — ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटि सदस्य योगेश भट्टराईले ठेकदारका पछि लाग्दा जुत्ता फाटेको गुनासो गरेका छन् ।
शनिबार नेपाल–चीनको सीमा अवलोकन गर्ने र ओलाङचुङगोलामा स्थानीयसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम भएपनि खराब मौषमका कारण थापा नेतृत्वको टोली सिधै संखुवासभा गएको छ । थापा संखुवासभाको किमाथांका सडक अवलोकन र अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको अवलोकन गरेर संखुवासभाको खाँदवारी गएको उनीसँगै रहेका मिङमाडण्डु शेर्पाले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ १२:५८